Aya ndiwo matipi akanakisa iwe aunofanirwa kuziva nezve yako Apple Watch | IPhone nhau
Wakambopihwa Apple Watch? Aya ndiwo matanho akanakisa aunofanirwa kuziva
Nekufamba kwenguva, iyo Apple watch yarega kuve niche chigadzirwa kuti ive yeakanyanya kufarirwa mukatalog yemidziyo iyo iyo Cupertino kambani ine mune yayo katarogu. Mutengo wayo we "zvemukati" uye ayo akasiyana siyana mamodheru anoita kuti ive nechokwadi chekuti chazove chimwe chezvipo zvine hunyanzvi mumhando yeApple.
Kana iwe uine Apple Watch nyowani, nhasi tiri kuzokudzidzisa iwe hunyengeri hwakawanda hwaungasaziva uye nekukubatsira iwe kuzvibata zvirinani zvirinani. Gara nesu uye uwane zvakanyanya kubva kune yako nyowani Apple Watch.
Sezvo pane dzimwe nguva zhinji, isu tasarudza kuperekedza ichi chinyorwa nevhidhiyo mauri iwe yaunogona kuona munguva chaiyo kuti aya manomano atiri kutaura nezvake anoshanda. Rangarira izvo zvakare, kana iwe ukanyorera uye ukasiya isu zvakafanana, unogona kubatsira iyo Actualidad iPhone nharaunda kuramba ichikura. Zvichakadaro, tinoenda ikoko neese manomano:
Rongedza zvishandiso zvisinei iwe zvaunoda: Uku ndiko kushanda kunogarwa nhaka kubva kuIOS, uye ndeyekuti natively, kana isu tiri mune iyo gallery inotiratidza zvese zvinoshandiswa uye isu tikadzvanya nekubata chiratidzo, ivo vachatanga kutamba uye iwe unogona kuzvironga. Izvi zvinogona zvakare kuitwa kubva kuApplication application nekupinda Tarisa> App Layout> Alignment.
Delete maapplication: Uku kushanda kunowirirana zvakanyanya neiyo yapfuura, kubvisa mashandisiro atinofanira kutevedzera nhanho imwechete yekubatisisa chikumbiro nekudzvanya pa "X". Kunyangwe isu tichigona zvakare kubva ku iPhone isu tinongodzika pasi mune zvinyorwa uye tinya pa "Ratidza pa iPhone" kuenderera kuibvisa.
Kutsvaga nekukurumidza kune edu maficha: Iyo Apple Watch ine "Dock" iyo inogoneswa nekudzvanya bhatani rakakura. Mukushandisa kwe "Tarisa" kweiyo iPhone tinogona kusarudza iyo "Dock" basa uye isu tichazosarudza kuti ndeapi emaapplication edu atinoda kuti akurumidze kuratidzwa pano.
Kurumidza kupindura kumeseji: Mazhinji maapplication anotibvumidza isu kupindura otomatiki nemhinduro dzakafanotemerwa kune ma ziviso atinogashira. Kuti tiite izvi, isu tinongobaya pane ziviso uye kudonhedza pasi kwemikana kunozovhura.
Gadzirisa mhinduro dzinokurumidza: Kana iwe usingade mhinduro dzekukurumidza dzinowanikwa neApple Watch yako, unogona kuzviita nyore nekutevera nzira iripazasi Tarisa> Mamessage> Default mhinduro uye iwe unogona kuzvisarudzira sezvaunoda, kuzadzisa zvaunoda zuva nezuva kana uchipindura
Nyarara kufona kubva kune yako iPhone: Kana yako iPhone neApple Watch iri kurira panguva imwe chete uye iwe usina yako iPhone iripedyo yekunyaradza kufona, nzira yekuda kuziva iyo vazhinji vasingazive kunyaradza iyo foni vasina kusungirira kumusoro ndeyekuvhara chidzitiro cheApple Watch zvakakwana neruoko rwako.
Bvisa zvese zviziviso panguva imwe chete: Kana iwe uchinge wagamuchira avalanche yezviziviso, iwe unotoziva kuti iyo Apple Watch hairongedzere ivo sezvinoita iyo iPhone inoita. Nekudaro, kana iwe ukatsvedza kubva kumusoro kusvika pasi, mushure mekuzivisa kwekupedzisira unenge uine bhatani Delete all notices.
Enda kumusoro pakutanga mune Anwendung: Iyo iPhone ine mashandiro ayo anotibvumidza isu kuti tidzokere pakutanga mushure mekuita yakawanda yekutsikisa nekungodzvanya iyo iPhone wachi. Izvo zvinoitika paApple Watch kana iwe ukadzvanya kona yepamusoro yekumusoro kwazviri.
Shandisai mode Tafura yepadivi pemubhedha: Iyo Apple Watch zvakare ine Yekudzora Center ine toni yemapfupi. Kuti tiwane iyo, isu tinongofanirwa kuiburitsa kubva pasi kumusoro. Kana isu tichida kuzviita kubva kunyorera tinofanirwa kuzviita zvishoma nezvishoma nekudzvanya masekondi maviri uye zvinoratidzwa.
Wakafirwa here yako iPhone? Zviwane neApple Watch: Isu tinodzokera kuControl Center, kwatinowana bhatani rakatsaurirwa kutsvaga iyo iPhone. Ichi chiratidzo chinoratidza iyo iPhone chinoita kuti ibudise inogara kurira kuti ikwanise kuiwana mushure mekunge yarasikirwa nayo, inobatsira zvikuru.
Darika kuverengera kuverengera kwekudzidzira. Paunotanga kurovedza muviri kutsva neApple Watch application uchaona kuti zvinoverengerwa pasi. Sezvo pasina nguva yekurasa, isu tinogona kusvetuka kuverenga uko nekungobata iyo skrini, ichatanga kuverenga iko kudzidziswa pasina mamwe matambudziko.
Usakanganwa kumbomira kubatira kwako: Iyo yekudzidzira interface inowoneka kana tikatsvedza kubva kuruboshwe tichienda kurudyi neirovedzi yakamisikidzwa ichatibvumidza kumbomira iko kudzidziswa, saka kana tisina imwe sarudzo kunze kwekumira kuti tinwe mvura kana kuenda kune chero chinodikanwa, tinogona kuunganidza data redu zvakanyatsonaka.
Disney naMickey Mouse wachi dzinotiudza iyo nguva: Iwe wakakwanisa kuongorora kubatana kwaApple naDisney paApple Watch, pakati pevamwe tinowana Mickey naMinnie wachi. Neichi chakaitwa, kana tikabaya Mickey kana Minnie, ivo vachatiudza iyo nguva iri kutemerwa panguva iyoyo.
Asi kwete chete nenzira iyi tinogona kunzwa iyo nguva: Tine huwandu hwakawanda hwetsika watchaface, uye kana tikagadzira matepi maviri anokurumidza pachikamu chenguva iyo nguva irikuratidzwa, Siri achataura nesu kuti atiudze chaizvo kuti inguvai panguva idzodzo.
Chengetedza mimhanzi yako: Mune marongero eApple Watch tichawana mukana wekuti kana tiri kutamba mimhanzi uye isu tikamisa wachi, tinogona kubata multimedia control. Kana iwe ukashandura Dhijitari Crown iwe unozogona kugadzirisa vhoriyamu yemahedhifoni ako, kunyanya kana iwe ukashandisa AirPods iwe unenge uine dzimwe sarudzo senge ANC yeiyo Pro modhi.
Aya ndiwo matipi akanakisa atinofunga kuti iwe unofanirwa kuziva nekusvika kweApple Watch yako nyowani kuitira kuti uwane kuita kwese kwakakodzera uye usatambise sekondi imwe chete. Zviripachena tine zvimwe zvinhu zvakawanda zvekukuudza nezveApple Watch uye ndozvatinogara tichiita pano kuActualidad iPhone, yeuka kuti zuva rega rega tinotangisa nhau uye dzidziso pane ako aunofarira Apple zvigadzirwa senge iyo iPhone, iPad uye zvimwe zvakawanda, saka wedzera iPhone News kune ako aunofarira tab uye ubatanidze nharaunda yedu kudzora yako yese Apple nharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Wakambopihwa Apple Watch? Aya ndiwo matanho akanakisa aunofanirwa kuziva
Chizvarwa chechipiri cheAirPods Pro chichauya muna Kubvumbi pamwe neiyo iPhone SE
Iyo iPhone 13 icharamba iine notch uye ichave iri 0,26 mm mukobvu